कुन कुन रोग कालो मरिचको प्रयोगले ठिक हुन्छ त ? - Nepali Sanchar : 24/7 Online Radio from Melbourne, Australia
कालो मरिच एन्टी-इन्फ्लेमेटरी गुणहरू हुन्छन्, जुन सूजन कम गर्न र सर्दी र खोकीमा धेरै प्रभावकारी हुन्छ। कालो मरिच को प्रयोगले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बढावा दिन्छ र मुटु रोगहरूलाई निको पार्न पनि मद्दत गर्दछ।
प्रमोद के सोनी : कालो मरिच औषधीय गुणहरूले भरिएको तातो मसला हो। कालो मरिच पकाउनेमा मात्र प्रयोग हुँदैन, तर धेरै रोगहरूको उपचारमा पनि प्रयोग हुन्छ। कालो मरिच एन्टी-इन्फ्लेमेटरी गुणहरू हुन्छन् जुन सूजन कम गर्नमा पनि प्रभावकारी छ, चिसो, चिसो र खोकीमा पनि। यसको प्रयोगले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बढावा दिन्छ र मुटु रोगहरू निको पार्न पनि मद्दत गर्दछ।
यसमा पाइपेरिन नामक तत्व समावेश हुन्छ जसकारण यसको स्वाद फरक छ। कालो मरिचमा आयन, पोटाशियम, म्याग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, भिटामिन ए र सीए र अन्य पौष्टिक तत्त्वहरू हुन्छन्।
कालो मरिच वजन घटाउन सहयोगी छ: कालो मरिचको नियमित प्रयोगले वजन नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ। कालो मरिचमा शक्तिशाली फाइटो न्यूट्रिशियनहरू हुन्छन् जसले बोसोको बाहिरी तह गलाउन सहयोग गर्दछ। यस कारणले गर्दा शरीरमा अधिक फ्याट भण्डार हुँदैन।
पाचन र पखाला रोक्छ: कालो मरिच खान पचाउन सार्है उपयोगी हुन्छ। कालो मरिच अपच, पखाला र कब्ज हटाउनका लागि धेरै नै प्रभावकारी हुन्छ। यसले पाचन शक्ति पनि बढाउँदछ।
कालो मरिचले क्यान्सर रोक्छ: कालो मरिचले क्यान्सर जस्ता घातक रोगबाट सुरक्षित छ। कालो मरिचको नियमित सेवनले स्तन क्यान्सर सिर्जना गर्दैन। कालो मरिचमा भिटामिन CA, भिटामिन एए, फ्लाभोनोइड्स, क्यारोटीन्स र अन्य एन्टी-ऑक्सीडन्टहरू हुन्छन् जुन क्यान्सर रोक्न मद्दत गर्दछ।
कालो मरिचले ग्यास हटाउँदछ: पेटमा ग्यास उत्पन्न भएमा कालो मरिच खान्नुहोस्। कालो मरिचमा कार्मिनेटिभ गुणहरू छन्, जसको कारण पेटमा ग्यास उत्पादन हुँदैन र पेट ठीक रहन्छ। कालो मरिचले पेट फुल्ने समस्या साथै दुख्ने समस्यामा समेत मदत गर्दछ।
कृपया सेवन गर्नु अघि आफ्नो डाक्टर संग सल्लाह लिनुहोला।
benefits of black pepperkalo marich ko faidapramod k soniप्रमोद के सोनी
स्वाठहरुको भर गर्नु हुन्न
Spread the loveउपल्लो छिमेकीको घर मलाई.
राष्ट्रिय कृषि टिभी च्यानलमा मधेशीको खिल्ली, टिभी च्यानलद्वारा प्रस्तोता माथि कार्यबाही
Spread the love101Sharesप्रमोद के सोनी, नेपाली.
उदयपुरमा बढ्दो कोरोना संक्रमण रोक्न वल्र्डभिजनद्वारा करिब ६ लाख १५ हजार बराबरको सहयोग
Spread the love236Sharesउदयपुर । वल्र्डभिजन इन्टरनेसनल.
नेपालमा कोभिड-१९ पुष्टी भएको संख्या ४२
Spread the loveउदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिका.
Spread the love308Sharesवल्र्डभिजन इन्टरनेशनल नेपालको सहयोग.
संक्रमण समझदारी पुर्बक नियन्त्रण गरौ , जातिय हिंशा न फैलाऔ – मानवता जोगाई राखौ
कुनै धार्मिक आस्था राख्न पाउनु गलत.